Alakamisy niakaran’i Jesoa any an-danitra – Trinitera Malagasy
Omany ny hiverenan’i Kristy
Asa 1, 1-11, Salamo 46
Efezy 1, 17-23
Matio 28, 16-20 (A)/
Marka 16, 15-20(B)
Lioka 24, 46-53 (D)
N.B. Ny vakiteny faharoa manokana taona D dia (Hebrio 9, 24-28; 10, 19-23),
saingy tsy ao amin’ny Alahady sy Andro fety
Hoy ny fampianaran’ny Katesizin’ny Fiangonana Katolika:
“Ary Izaho rahefa tafasandratra hiala amin’ny tany, dia hitarika ny olombelona rehetra hanatona Ahy” (Jo 12,32). Ny fanandratana teo amin’ny Hazofijaliana dia midika sy milaza ny fanandratana amin’ny Fiakarana any an-danitra, izay izany no fanombohany. I Jesoa-Kristy, Mpisorona tokan’ny Fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay, dia tsy “niditra tao amin’ny fitoerana masina nataon-tanan’olombelona (…), fa any an-danitra, mba hiseho ankehitriny eo anatrehan’Andriamanitra ho antsika” (Heb 9,24) [KFK 662].
Inona no niova tamin’ny niakaran’i Jesoa any amin’ny Voninahitry ny Ray? Raha jerena avy aty ivelany dia tsy misy: ny asa, ny fisasarana sy ny fahasahiranana, ny ahiahy sy tebiteby dia ifandimbiasan’ny taranaka mifandimby, saingy ny Pakan’i Kristy kosa dia nanazava ka nanome heviny vaovao ny fiainan’ny olombelona rehetra. Raha ao amin’ny efitrano iray tsy dia milamina loatra ianao amin’ny andro alina ka tsy mirehitra ny jiro, tsy hanova ny filamina’ny trano ny fandrehetana ny jiro, fa hahitanao kosa izay hasiana ny tongotra. Samihafa ny miraparapa amin’ny haizina tsy misy jiro sy ny mandeha amin’ny mazava.
Ho antsika no niakaran’i Jesoa any an-danitra ka ny hazofijaliana no lalana nizorany mba hahatratrany izany voninahitry ny Ray izany. Amin’ny fitantaran’ny Evanjely sy ny Asan’ny Apôstôly, izay samy sanganasan’i Md Lioka dia tsy mifanaraka na ny fotoana na ny toerana niakaran’i Jesoa any an-danitra, ary na dia ny amin’ny asan’ny Apôstôly aza (Asa 1, 3), dia lazain’i Lioka fa Sabata io 40 andro aorian’ny Paka io (Asa 1, 12), raha alakamisy araka ny hikaontiantsika azy izao. Izany dia ampy hahokatra ny saina hahatsapa fa tsy ny fotoana na ny toerana na ny fomba ilazana ny niakaran’i Jesoa tany an-danitra (ity farany dia mazava araka ny Katesizy teny am-piandohana) no antony nanoratan’i Md Lioka fa ny hamaly ny olana niainan’ny kristianina nanoratany ary hanampy antsika kosa hisokatra amin’ny finoana ka hankalaza izany araka ny tokony ho izy.
Anisan’ny fanontaniana mivaivay tamin’izany ny fiandrasana ny hiverenan’ny Zanak’olona: “Tompoko, amin’izay va ny fotoana hanangananao ny Fanjakan’Israely?”. Tsy ny hahalala ny valin’izany anefa no tokony himasohan’ny Mpianatra fa ny handray ny hery avy amin’ny Fanahy Masina hijoroana ho vavolombelona hatrany amin’ny fara vazantany. Fantatr’i Md Lioka tsara ny tantaran’i Elia sy Elize (2 Mpanjaka 2, 9-15), ka nampiasainy mba hilazany fa ny mpianatr’i Jesoa koa dia tsy misy afaka hahazo ny Fanahiny raha tsy mibanjina Azy miakatra any an-danitra. Tsy afaka ny handray ny Fanahy Masina izay tsy mahita fa ny Hazofijaliana no lalana mitondra ho amin’ny voninahitry ny lanitra. Tsy hoe Andriamanitra tsy akory no mandà tsy hanome ny Fanahiny, fa ny olona no mety handrindrina ny varavarany, mba tsy hidiran’ny hazavana.
Dia mazava loatra, ny rahona (jereo Eksaody 13, 22) sy Jesoa nisondrotra ka tsy hitan’ny mason’izy ireo intsony, ary ireo roalahy miakanjo fotsy mitovy amin’ireo tany am-pasana ny andron’ny Paka (Lk 24, 4) dia mamaly ny hetahetan’ny olona, dia ireo izay niandry ny hiverenan’i Jesoa haingana handringana ny fahavalo sy ny mpampijaly, ka nandany andro nibanjina ny lanitra miandry ny hiverenany. Mazava anefa ny hafatra ampitain’i Jesoa araka ny fitantaran’i Md Lioka: ny mpianatra no ho vavolombelona hanohy ny efa natombok’i Jesoa. Sambatra izay mpanompo tratran’ny Tompo manatanteraka izany amin’ny andro hiverenany (Lk 12, 37).
Ao amin’ny vakiteny faharoa (Sorona Alahady sy andro fety: Efez 1, 17-23) dia mangataka ny fahendrena avy amin’Andriamanitra i Md Paoly ho an’ny Efeziana mba hahazoan’izy ireo ny misterin’ny Eglizy sy ny haben’ny fampanantenana niantsoana antsika. Tsy sanatria ny fijoroana ho vavolombelona no hanadinoana ny halehibeazan’ny voninahitry ny lova nomanin’Andriamanitra ho antsika ao amin’i Kristy izay filoha sy fanaperana, ka mety hahakivy manoloana ny fitsapàna sy ny sedra-piainana mety hatrehina.
Tsy mora ny mahazo izay voasoratra ao amin’ny Soratra Masina. Any amin’ny fiandohan’ny Evanjeliny dia ambaran’i Lioka fa na i Maria Reniny aza dia gaga amin’ny fahitana ny fahatanteranan’ny fandaharan’Andriamanitra tao amin’ny zanany (Lk 2, 33.50). Tsy mora ny mahazo ny hoe “tsy maintsy mijaly”, tsy maintsy maty, na dia eo aza ny hoe “fa hitsangan-ko velona amin’ny andro fahatelo”. Nandritra ny Herinandro Masina isika nandinika ny faminanian’Izaia mikasika ny Mpanompon’YHWH. Tsy mora ny manaiky io endriky ny Mesia ampijaliana io. Avy amin’ny anarany anefa no “hitoriana ny fibebahana sy ny famelana ny fahotana”, ary izany no famonjena ho an’ny firenena rehetra (Jereo Izaia 49,6/Lk 1,77).
Nankinin’i Jesoa amin’ny mpianany izay “iraka” izany. Tsy ambom-pon’olombelona anefa no hanatanterahantsika izany. Asainy mijanona ao an-tanàna izay tsy mbola nandray ny hery avy any ambony. Izay tsy feno ny Fanahy Masina, izay tsy manam-potoana hijanonana hibanjina an’i Jesoa mba hahalalana azy bebe kokoa sy hitiavana Azy, dia hivoaka hitory ny tenany fa tsy hitory an’i Kristy. Izay tsy manam-potoana hihainoana ny Teniny, “Izay tsy mitondra ny Tenin’Andriamanitra ao am-pony ka tsy mizotra miaraka amin’ny Eglizy, dia tsy hahasoa na iza na iza”, hoy ny Papa François taminay Pretra tany Asizy (4 oktobra 2013). Tsy isika fa Izy Tompo no mamonjy an’izao tontolo izao.
Tso-drano no omen’i Jesoa ny Mpianany. Amin’ny faran’ny fisoronana dia mitso-drano ny vahoaka ny Mpisorom-be miaraka amin’izay mpisorona nahazo ny loka mba hanolotra ny Emboka manitra, ary mivavaka ho azy ireo (Sir -Eklez 50, 20). I Jesoa no ilay Mpisorom-be (jereo ny KFK 662 ery ambony), ka ilay Tso-drano tsy nomen’i Zakaria tany amin’ny fiandohan’ny Evanjely, satria moana izy vita ny fisoronana (Lk 1,22), dia omen’ilay Mpisorom-be vaovao kosa ka hahafeno hafaliana ireo izay mandray izany (Lk 24, 50), ka hahafahany mahita fa fiakarana any amin’ny voninahitry ny Ray no noheverin’ny “fahavalo” ho fiafaran’ny tantara, tamin’ny namonoan’izy ireo ny Mpampianatra.
Ny anton’ny hafaliana dia satria i Jesoa niakatra any an-danitra nitsahoan’ny Mpianatra dia tsy manalavitra azy ireo fa manatanteraka ny teniny: “indro aho eo aminareo mandrakariva mandrapahatapitr’izao tontolo izao” (Mt 28, 20).
Raha hiverenana alalinina ny Evanjely araka an’i Md Lioka, ao amin’ny andininy 44, mialoha ny vakiteny anio dia mazava fa ny Misterin’ny Paka, i Kristy maty fa nitsangan-ko velona no fahatanterahan’ny Soratra Masina (Lalan’i Moizy, Mpaminany, Salamo: TKN). I Jesoa no manokatra ny saintsika mba hahafantatra ny Soratra Masina. Izy no manome antsika an’ilay Mpanafaka alahelo mba hahafahantsika mahazo izay nolazainy, ka hino fa Izy no fahatanterahan’ny fampanantenan’Andriamanitra.
Amin’ny anarany no hitoriana amin’ny firenen-drehetra ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Tsy sanatria hisy hiambo ho mpitondra famonjena ho an’ny hafa. Tsy isika fa Izy Tompo no mamonjy an’izao tontolo izao, hoy ny Papa, efa nolazaintsika teo. Ireo voairaka dia tsy hanao inona afa-tsy ny hijoro ho vavolombelon’ny fibebahana sy ny famelan-keloka nanova ny fiainan’izy ireo. Ho vavolombelona hanambara fa tsy misy fiainana raha tsy ao amin’ny fiombonana amin’Andriamanitra, satria i Jesoa maty no fanehoana ny fitiavan’Andriamanitra izay mahery noho ny fahafatesana (Tononkira 8, 6), fitiavana itiavany ny firenen-drehetra, ny olona tsirairay.
Ao amin’ny Vakiteny I (Asa 1, 8), dia ho vavolombelon’i Jesoa no hiantsoana ny Apôstôly, eto kosa indray dia ny ho vavolombelon’ny Fibebahana sy ny Famelan-keloka. Tsy mifanohitra izany, i Jesoa ny sy iraka nampanaovina Azy no tsy maintsy ataon’izay te ho mpianany eo ambanimaso, ka ny zavatra rehetra nataon’i Jesoa sy nampianariny (Asa 1, 1) no tsy maintsy hatao sy ampianarin’ny mpianatra ihany koa. Nasaina nitoetra tao an-tanàna izy ireo mandra-pandray ny hery avy any ambony, fa i Jesoa kosa indray no nitondra azy ireo hivoaka ny tanàna hatrany Betania.
Izany no amafisin’i Md Matio (Mt 28, 16-20), ka ireo Mpianatra izay nitsaoka, na dia mbola nisalasala aza, dia nantsoin’i Jesoa hatoky fa ny fiakarany eo an-kavanan’ny Ray, dia hahafahany manatanteraka ny fampanantenany: handefa ny Fanahy Masina ary ho kiadin’ireo mpianany ambara-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao. Ny fijoroana ho vavolombelona dia tsy inona fa mba hampianarana ny olona (na ny marimarina kokoa, hanao izay hahatonga ny firenena rehetra ho mpianatr’i Jesoa: Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη Mat 28,19) hitandrina izay nandidian’i Jesoa ny Mpianatra. Tsy afaka ny handray ny iraka ampanaovin’i Jesoa anefa, raha tsy miverina any Galilea, miverina amin’ny fiantsoana voalohany, hahatsapana fa Izy Tompo no nitia antsika mialoha, ary avy eo no hahatsiarovantsika izay rehetra nandidiany: didi vaovao niainany mba hanaovan’ny mpianatra tahaka ny nataony (Joany 13, 15).
Izay mihevitra fa mahay zavatra ka hanadino io voaloham-pitiavana io dia tsy afaka ny hitsaoka ny Tompo, tsy afaka ny hanoroka ny tongony, hanoroka ny tongotr’ireo endrika hisehoany, ka iriany koa mba hosasana tongotra (hotompoina) sy hotiavina; tsy tendrombohitra izay tiantsika hiakarana anefa no hahafahana mihaona amin’i Jesoa fa amin’izay nasainy alehantsika. Io ilay tendrombohitra nampianarany antsika ny sitrapon’ny Rainy mikasika ny fahasambarantsika (Mt 5, 1ss) ka nidinany hanao soa hatraiza hatraiza (Mt 8,1ss), teo no nivavahany manokanaka nahafahany manohy ny iraka nampanaovina Azy mba ho voninahitry ny Ray (Mt 14, 23ss); teo no nanambarany fa Izy ilay tonga hanafaka ny rofin’ireo marary sy mijaly, ilay Mesia nampanantenaina (Mt 15, 29ss); teo no nanehoany ny tena endriny be voninahitra, fahatanterahan’ny Lalàna sy ny Mpaminany (Mt 17, 1ss). Eo no hahenoantsika ny feon’ny Ray manasa antsika hihaino Azy ka hahafahantsika mahita Azy marina tokoa.
Araka izany, ny hoe mitoetra ao an-tanàna (araka ny vakiteny I) dia mba hilazana amin’ny mpianatra fa fanomezan’Andriamanitra ho an’izay mahay miandry Azy ny Fanahy Masina, izay ain’Andriamanitra, ary ambaran’i Lioka ihany, fa ny mpianatra maharitra mivavaka amin’i Maria Renin’i Jesoa no afaka mandray ny Fanahy Masina. Midika koa anefa izany fa ny hoe mitoetra eo an-tanàna, dia ny mitoetra ao amin’izay hitondran’i Jesoa antsika, na any an-tendrombohitra, na any Betania (Βηθανία) tranon’ny ory, ka hahafahantsika mandray ny Fanahy Masina amin’ny fanalana alahelo ireo zanak’Andriamanitra ory sy mijaly.
Ny fankalazana ataontsika anio anie hampitombo ny finoantsika ny lanitra, ka hampisy hasiny ny ezaka ataontsika eto an-tany hoenti-manorina ny Fanjakan’Andriamanitra, hijoroantsika ho vavolombelon’ny fibebahana sy ny famelan-keloka marina tokoa, tsy amin’ny herin’ny tenantsika fa amin’ny fitokiana ny herin’ny Fanahy Masina, fanomezan’i Kristy nitsangan-ko velona ho an’izay mino Azy.